Kasị irè arọ ọnwụ ntụ ntụ: Sibutramine ntụ ntụ (Meridia)
/blog/Sibutramine hcl/Kasị irè arọ ọnwụ ntụ ntụ: Sibutramine ntụ ntụ (Meridia)
Ihe na 09 / 13 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Sibutramine hcl. O nwere 65 Comments.
Ibu ibu na-eme ka ohere nke ahụike dị njọ, gụnyere ọrịa shuga, ọrịa obi, ọrịa strok na ụfọdụ ọrịa cancer. Ibu ibu dị ka akụkụ nke nchịkwa dị arọ pụrụ inyere aka belata ihe ize ndụ nke ọrịa ndị a nwere ike ịnwụ. Ọ bụrụ na ibu oke ma ọ bụ oke, ị kwesịrị ịtụle ịgbakwunye Sibutraminen'ime usoro nlekọta arọ gị. Nke a bụ nlezianya omimi nke Sibutramine na-enyere gị aka inweta ozi niile dị mkpa banyere ọgwụ a.
Njirimara Chemical nke Sibutramine
ọgwụ Ọdịdị MGBE NKE MBA Debanye aha NUMBER
Gịnị bụ Sibutramine
Sibutramine bụ arọ ọnwụ ọgwụ na-eme ka onye na-egbu nri. A na-ere ọgwụ a n'okpuru aha dị iche iche, gụnyere Meridia ntụ ntụ, Sibutrex, Siredia, na Reductil. Na United States, a na-akọwa ọgwụ ahụ n'okpuru Ntọala nke IV, a na-ejikwa ya mgbe nile jiri ụdị nnu hydrochloride selhydrate.
Mgbe e bu ụzọ tinye Sibutramine, e bu n'uche maka iji ya mee ihe dị ka antidepressant. N'ụzọ dị mwute, ọgwụ ahụ adịghị enwe ihe ịga nke ọma n'ịgwọ ịda mbà n'obi. Otú ọ dị, ụgwọ ọrụ a bụ ngọzi na-edozi ndị buru ibu na ndị na-egbu egbu. Ndị ọrịa dara mbà n'obi kwuru na ọgwụ ọjọọ ahụ belata caloric nri ma belata agụụ, si otú ahụ nyere ha aka ịkwụsị ibu arọ. Na 1997, FDA kwadoro Sibutramine maka ojiji dịka ọgwụ na-efu ọnwụ na United States.
Usoro ihe omume Sibutramine
A na - ekwu na Sibutramine bụ ngwaahịa nke 2 na - arụ ọrụ metabolites - emeesmethyl Sibutramine ntụ ntụ (M2; BTS-54505) na desmethylsibutramine (M1; BTS-54354), nke nwere ike karịa MRI.
Sibutramine (na Metabolites)
Kọkọrọ DAT SERT NET
Sibutramine 943-1,200 298-2,800 350-5,451
Ụkpụrụ bụ Ki(nM).
N'ime ụmụ mmadụ, Sibutramine ntụ ntụ, nke bụ onye na-emechi ihe mgbochi monoamine, na-ebelata nlọghachi nke ụfọdụ ihe ụfọdụ na ọkwa ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-ebelata nchịkọta site na 16 percent, serotonin site 54 pasent, na norepinephrine site 73 pasent. N'ime ime otú ahụ, ọkwa nke ihe ndị a na eriri nke synaptic na-amụba, si otú ahụ na-eme ka ụda satiety dị elu.
Fenfluramine na amphetamine bụ ndị agadi na-arụ ọrụ na-eme ka ndị na-emepụta ihe ndị a na-emepụta, kama ịmetụtaghachi ha. N'adịghị ka ọgwụ ndị ọzọ serotonergic na-egbochi agụụ dị ka fenfluramine, sibutramine tinyere ndị metabolite nwere nanị njikọ dị ala ma bụrụ nke na-enweghị ike maka 5-HT2Conye nnata.
N'ihe dị ka 77 pasent Sibutramine na-etinye uche nke ọma site na akụkụ eriri afọ. Otú ọ dị, ọgwụ ahụ na-enweta ihe mbụ dị na mbụ-metabolism, na-ebelata ikike bioavailability. Ọgwụ ahụ na-enweta ọkwa ọkwa plasma kacha elu mgbe naanị otu elekere. O nwekwara ọkara nke otu awa.
Jiri uzo Sibutramine
Ebe ọ bụ na a chọpụtara na Sibutramine dị irè iji gbochie agụụ, a na-eji ya ọgwụ dị arọ nke ndị ọrịa nwere nsogbu nsogbu dị njọ. Mgbe a na-ewere ya, Sibutramine na-emetụta ụbụrụ na ụbụrụ na-emetụta nrụzi dị arọ.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla metụtara ibu dịka ọbara mgbali elu, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọrịa shuga, ọ dị mma na ị ga - ejikọta Sibutramine na usoro ndị ọzọ dị arọ dị ka ịme ihe ma nwụọ.
Enwere ọtụtụ nchọpụta nchịkọta nke a na-ejighị n'aka na-eme nchọpụta iji nyochaa mmetụta dị njọ nke sibutramine. N'otu nnyocha, ndị ọrụ afọ ofufo 1047 bụ ndị na-enye onwe ha ọrụ dị iche iche na-etinye n'ọnọdụ dị iche iche nke placebo ma ọ bụ sibutramine ruo oge isii. Ọnwụ ntụsara ahụ maka ebe a na placebo bụ 2.7 percent, 7.4 percent na 25 milligram / ụbọchị, 6.1 pasent na 10 milligram / ụbọchị, na 3.9 percent na 5 milligram / ụbọchị.
N'ọmụmụ ihe ọzọ nke gbasara ọnwa isii, sibutramine ma ọ bụ placebo na-eji ya na nri calorie dị nnọọ ala. Onu ogugu 86 nke ndi choputara sibutramine nwere ike idafu ihe kariri 5 percent nke uzo ha. Ma ndị na-ewere placebo, ha jisiri ike hapụ 55 pasent. N'ime ọnwa 12 ka a nọgidere na-eji ya eme ihe, pasent 75 nke ndị na-eji sibutramine nọgidere na-enwe ọnụ ọgụgụ dị njọ, ma e jiri ya tụnyere 42 pasent nke ndị were placebo.
Na ikpe ọzọ a na-achịkwa na-achịkwa ndị ọrụ afọ ofufo 605, a na-etinye ụzọ dị iche iche iji nwalee. A nyere ndị ọrụ afọ ofufo 10 milligram nke sibutramine kwa ụbọchị na mgbakwunye na nri dị obere-kalori. Ndị na-agbaghara idaha 5 pasent nke ọkara ha dị irè na-aga na-etinye placebo ma ọ bụ 10 milligrams nke sibutramine kwa ụbọchị maka ọnwa 18 ọzọ. Onu ogugu 80 nke ndi na - ewere sibutramine jisiri ike na - echefu uzo ha, ma e jiri ya tụnyere 16 percent nke ndi choro placebo.
Siosramine ntụ ntụ
Ndị a tụrụ aro sibutramine usoro onunu ogwu bụ milligrams 10 kwa ụbọchị, nke a ga-eji ọnụ kwuo.
Dabere na nkwụsị gị ma ọ bụ mmetụta ọgwụgwọ nke ọgwụ ahụ, dọkịta gị nwere ike ịgbanwe ọgwụ gị iji jide n'aka na ị ga-enweta nsonaazụ kachasị mma.
Dị ka ọmụmaatụ, dọkịta gị nwere ike ịhazi ụtụtụ gị kwa ụbọchị na milligrams 5 ma ọ bụ ruo milligrams 15 kwa ụbọchị.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na iji Sibutramine eme ihe ga-ejedebe na afọ 2.
Nlezianya mgbe ị na-ewere Sibutramine ntụ ntụ
Enwere ufodu uzo ebe ekwesighi iji Sibutramine. Ha gụnyere:
Ejila Sibutramine ma ọ bụrụ na ị bụ nwata karịa 16 afọ ma ọ bụ karịa 65 afọ.
Ikwesịrị ịkwụsị iji Sibutramine ma ọ bụrụ na ịmepụta mmeghachi omume na-adịghị na ya.
I kwesiri inwe nnukwu nsogbu Mmetụta mmetụta Sibutramine, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ị kwụsị ịṅụ ọgwụ ọgwụ ọjọọ ngwa ngwa.
I kwesịghị ịṅụ ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ọbara mgbali elu.
Gbalịa iji Sibutramine mee ihe ma ọ bụrụ na ị nwere akụkọ ihe mere eme nke ọrịa strok, ọrịa obi, ọrịa nkwonkwo akwara, nkume na-egbu egbu, glaucoma, ọrịa imeju, ọrịa akụrụ, ịjụ oyi n'ahụ, ọbara ọgbụgba, ma ọ bụ ijide.
Zere ịṅụ ọgwụ ahụ maọbụrụ na ị nwere ajọ nsogbu iri nri dịka nkwụsị ma ọ bụ nsogbu.
Ihe ị ga-ezere mgbe ị na-ewere Sibutramine
A gaghị ejikọta ihe ndị na-esonụ na Sibutramine:
Nri nri nri
Nri na oyi na-atụ ma ọ bụ ọgwụ nro
Mmanya ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ.
MAO ndị na-emechi - tranylcypromine, selegiline, rasagiline, phenelzine, isocarboxazid na furazolidone.
Ndepụta na / ma ọ bụ n'elu-na-counter arọ ọnwụ ngwaahịa
Tupu iwere Sibutramine, ọ dị mkpa ka ị gwa dọkịta gị banyere ọnọdụ ahụike ọ bụla ị nwere ike ịta ahụhụ. Ikwesịrị ịgwa dọkịta banyere ọgwụ ndị na-ahụ maka ọgwụ na ọgwụ ndị ị na-eji ugbu a. Nke a na-agụnye ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa isi, ọrịa ọgwụ ọjọọ, ọgwụ nrịanwụ ma ọ bụ ọgwụ oyi, ma ọ bụ ọgwụ antidepressants.
Ọ bụrụ na ịnwụghị ma ọ dịkarịa ala pound 4 mgbe ịṅụ Sibutramine na nri obere calorie mgbe oge 4 gasịrị, ọ bụ ihe dị mkpa na ị ga-agwa dọkịta gị.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime
Maka nsonaazụ kachasị mma, ọ ga-adị mma ka ị were ụbọchị gị kwa ụbọchị n'otu oge kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-atụfu ọgwụ, echela na ị ga-emekwu ọgwụ iji dozie maka onye ahụ furu efu. Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịnara ọgwụ ahụ ozugbo ị na-echeta, ma ọ bụ mee ka ọ ghara ịchọrọ ya ma ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge maka usoro mmemme ọzọ.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - atụgharị na Sibutramine ntụ ntụ
Ọ bụrụ na ị na-ewere dose dị elu nke Sibutramine karịa ọgwụ a na-atụ aro kwa ụbọchị, ị nwere ike ịnwe mgbaàmà nkwụsịtụ dịka nrịanwụ, obi ọkụ, na isi ọwụwa. Ọ bụrụ na ị na-atụgharị uche na Sibutramine, ọ dị mkpa ịchọta nlekọta ahụike mberede n'otu oge. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịkpọ Line Line Help.
National Library of Medicine, Institute of Health, ndepụta Sibutramine, peeji nke 1-3
Nisoli E, Carruba MO (October 2000). "Nyocha nke nchekwa na ịdị irè nke sibutramine, ọgwụ na-egbochi ịṅụ oké ibu na usoro ihe omume nke ime ihe".Nnukwu nyocha.1(2): 127-39.
Rothman RB, Baumann MH (May 2009)."Ọrịa Serotonergic na ọrịa obi valvular".Nyocha ndị ọkachamara na Nchedo Ọrịa. 8 (3): 317-29.
Dr. Patrick Young10 / 11 / 2018 na 5: 18 am
OK, M ga-ezite gị email iji kwado ọnụahịa ahụ.
Lui10 / 10 / 2018 na 7: 01 pm
Na na na na na na na sibutramine ...
admin, admin09 / 27 / 2018 na 10: 22 pm
Nke ahụ mara mma! Ịnwere ike izipu ozi gị sibutramine na email anyị: [Email na-echebe]. Mgbe ahụ, onye nlekọta AASraw ga-akpọtụrụ gị ma kwuo ihe ndị ọzọ gbasara iwu ndị sibutramine. Na-atụ anya ịnụ olu gị!
admin, admin09 / 27 / 2018 na 9: 58 pm
Ma eleghị anya, ị nwere ike ime nke ahụ kama ọ siri ike dị ka anyị si mara. Ọ bụ nke mbụ, sibutramine adịghị maka ụfọdụ mba. N'ikpeazụ, ọtụtụ ụlọ ahịa na-azụta sibutramine ntụ ntụ site na china na ọnụ ala dị ala wee ree ụlọ ahịa na mba ha dịka ọnụ ahịa dị elu. Ya mere, echere m na ị nwere ike ịnye usoro sibutramine ozugbo ịchọtara ihe mgbapụta a pụrụ ịdabere na ya. Olileanya nke nwere ike inyere ntakịrị.
admin, admin09 / 27 / 2018 na 9: 51 pm
Hi Robert, ọ bụ ezigbo ajụjụ. Mgbe ị na-eme ihe na-ezighị ezi na-eme ihe na-ezighị ezi, mmetụta gị dị arọ agaghị adị anya ma ọ bụrụ na mmetụta ahụ sibutramine ga-eweta nsogbu n'ahụ gị. Ya mere biko were shebutramine n'okpuru nduzi dọkịta gị, Ya mere, ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ dị njọ. Daalụ maka ajụjụ gị ọzọ.
admin, admin09 / 27 / 2018 na 9: 45 pm
Ọ bụla ọgwụ nwere ndụ ndụ, sibutramine abụghị iche. Dị ka ọ dị n'ozuzu, ọ bụ afọ 2-3 dị ndụ.
admin, admin09 / 26 / 2018 na 6: 20 am
Nke ahụ dị mma! Ma eleghị anya, ị nwere ike ịzụtara ya obere skelam ma jiri sheolramine mee ihe n'usoro ọgwụ ziri ezi, ọ ga-adị mma. Ị bụ ezigbo di.
Red Anderson09 / 25 / 2018 na 9: 29 am
Enweghị ihe ọjọọ na iji ọgwụ a eme ihe dị ka FDA kwadoro. N'agbanyeghị nke ahụ, ndị na-ezube iwepụ ntụ ntụ kwesịrị ibu ụzọ mụta ihe, echekwara m na nke a ga-enyere ịkụziri ndị nwere mmasị ịnara Sibutramine.
Marky Lee09 / 25 / 2018 na 9: 27 am
M meriri nsogbu m, mana m na-atụ egwu na m nwere ike ịdaba n'ụgbọala ahụ ma laghachighachi na m na-emekarị onwe m oke. Ugbu a, ana m ewere Sibutramine site n'oge ruo n'oge dị ka ihe mkpuchi nchekwa na-enyere m aka ịnọgide na-efu ọnwụ m ugbu a. Ọ dịghị ihe ọ bụla na-ezighị ezi n'iji shebutramine, ma echere m na ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ejikọtara ya na ndụ dị mma ma dị mma.
roberachi09 / 24 / 2018 na 3: 10 pm
Sibutramine Na-ada ka ọgwụ dị ezigbo mkpa ma dị irè. Ma enwere m ajụjụ ọ bụla mere ị kwusiri ike na Sibutramine ga-ejedebe naanị afọ 2?
Robert M09 / 24 / 2018 na 3: 03 pm
Achọpụtala m na ị nwere ọnọdụ dị oké njọ na otú ị ga - esi na - eme ọgwụ na - amalite. Kedu ụdị mmetụta ha nwere ma ọ bụrụ na ha ewere ya na-ezighị ezi?
Dan Carson09 / 24 / 2018 na 2: 39 pm
Ihe osise ndị a na-egosi na-egosi na uru ọgwụ ọjọọ bara uru. Ọ ga-amasị m ịhụ ọtụtụ mgbe ọ na-aghọwanye ihe ọzọ.
John Herman09 / 24 / 2018 na 2: 32 pm
Lee, nke a na-ada ụda dị irè maka ọnwụ ọnwụ. Ihe na-akpata ọnwụ maka ndị na-ewere Sibutramine ma e jiri ya tụnyere ndị were placebo ahụ dị oke mma. Daalụ maka ịkekọrịta.
Mbet09 / 24 / 2018 na 9: 27 am
Naanị ịmata ịmata ma m nwere ike ịzụta sibutramine na ọnọdụ anyị ebe ịzụrụ sibutramine online.it ga-aka mma n'ụzọ ahụ.
Femi09 / 24 / 2018 na 9: 17 am
Na-enyere aka ịgbasa uru nke sibutramine n'ihi na ha dị ọtụtụ nke na-achọ ịhapụ ụfọdụ ibu. Echere m na ọ ga-enyere ha aka na abụba abụba mgbe ha na-ewere sibutramine.
Albeneth09 / 23 / 2018 na 10: 55 pm
Anụrụ m ọtụtụ ọgwụ ọjọọ na-efu na ntanetị. Ịgụ nyochaa Sibutramine yiri ka ọ na-adọrọ mmasị.
Susan09 / 23 / 2018 na 8: 18 pm
Oge mbụ ị nụ banyere ntụ ntụ a. O yiri ka ọgwụ ọjọọ na-efu dị irè. Nke a bara uru iji gbalịa ịmalite ihe mgbu ka ọ ghara ịdị arọ.
Doug Brians09 / 23 / 2018 na 5: 28 pm
Ọ na-adọrọ mmasị na ụdị ahụ ọ bụla nwere ike inwe mmeghachi omume dị iche na mmụba ọnwụ. O nwere ike ịbụ na ọ bụghị echiche ọjọọ ịlele ihe ịrịba ama dị mkpa na obi ị na-akụ mgbe niile ka ị na-aṅụ ọgwụ ọjọọ.
Hank Nolan09 / 23 / 2018 na 5: 22 pm
Ọ dị mma ịkwụsị ihe ọ bụla dị arọ ọnwụ na-agbakwunye na otú ha si na-efu ibu. Ọ dị mma na e depụtara ihe niile site na mgbe ọgwụ sibutramine na-abanye n'ime ya nakwa ihe niile ị ga-eji na-eme ihe maka iji ụbọchị ọ bụla mee ihe.
Sam09 / 23 / 2018 na 2: 01 pm
Maka ndị kpọrọ ọgwụ ọjọọ asị ị ga-ahọrọ sibutramine n'ihi na a na-ewere okwu okwu sibutramine nke m maara ọtụtụ ndị dị ka.
Udi09 / 23 / 2018 na 1: 53 pm
Ihe oyiyi ndị dị na ibe a dị ezigbo mkpa ma ọ ga-enye aka ma gbaa ume ibu na nnukwu akụkụ iji wepu sibutramine. Echere m na onyinyo ahụ dị adị n'ezie ma nyere anyị aka ka anyị ghara ịdị arọ.
na-agba ọsọ09 / 23 / 2018 na 7: 11 am
Lee, Nke a bụ ozi ọma nye ndị niile na-achọ ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi ghara ibu ibu. Naanị olileanya na mmetụta ndị dị mma na-anabata ma ana m eche na ịzụta sibutramine iji were abụba m.
Weightloss ndị uwe ojii09 / 22 / 2018 na 9: 31 pm
Biko mara, àgwà na ịdị ọcha dị ezigbo mkpa mgbe ị zụrụ sibutramine ntụ ntụ na weebụ. Ozughị na ọ dị ọnụ ala.
Mina Sib09 / 22 / 2018 na 9: 28 pm
Sibutramine bụ ọgwụ dị arọ nke dị arọ nke na-eme ka onye na-egbu nri. Ọtụtụ ndị mmadụ nabatara ya n'ụwa.
Rhona Burchill09 / 22 / 2018 na 8: 58 pm
Dị ka nwanyị, Achọrọ m ka ọdịdị m ma nọrọ n'ọnọdụ dị mma. Isiokwu a na-enyere m aka mgbe ahụ, m na-eme atụmatụ ịhazi ụfọdụ ndị ọkachamara n'akụkụ m ma nwee olileanya na onyinyo nwere ike ịbụ ezigbo.
Victor09 / 22 / 2018 na 8: 17 pm
Echere m na ihe oriri a abụghị afọ na okike, echere m ịnye nwa m nwanyị na di m ịzụta ihe ụmụaka sibutramine. Kedu ka m ga esi nweta ntụ ntụ ahụ?
Malik Vennity09 / 22 / 2018 na 7: 43 pm
Ọ bụ obere bioavailability na mmetụta ya na ndị na-ahụ maka igwe na-adọrọ nnọọ mmasị. Ekwenyesiri m ike na ihe oriri na mmega ahụ na-adịgide adịgide, na-ewere ya na ọ bụ ezigbo nwa.
Howy Ridell09 / 22 / 2018 na 7: 37 pm
Ihe ndị FDA kwadoro na nke kachasị elu mgbe ha nwesịrị awa elekere anya! Echere m na nke a bụ ọgwụ ebube. Ịhụ ngbanwe ngwa ngwa mgbe izu anọ gasịrị adịghị njọ.
Janine Marie Alexandra Bocateja09 / 22 / 2018 na 12: 54 pm
E nwere 1 sibutramine ntụ ntụ ndị na-ere ahịa, nke dịkarịsịrị na Eshia. Obodo kachasị elu bụ China (Mainland), nke na-enye 100% nke skeramma ntụ ntụ.
Ihe oriri Siolramine bụ ihe kachasị ewu ewu na Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Market Market, na North America.
fenny09 / 22 / 2018 na 7: 28 am
Ibu oke nwere ike ibute ọnwụ na mberede nakwa dị ka ndị dị otú ahụ nwere nsogbu a kwesịrị ịtụgharị uche na ịnweta ụfọdụ n'ime ihe mgbakwunye ndị a ka ha ghara idalata karịsịa ma ọ bụrụ na mmadụ na-emekarị ụzọ, na-ewere ụfọdụ ọgwụ ọjọọ iji chekwaa ahụ gị.
nri09 / 22 / 2018 na 5: 59 am
A ghaghị iwere Sibutramine dị ka ndenye ọgwụ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọhụụ, a ga-ewepụ ihe eji eme ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na enyemaka ahụike ga-adị ngwa ngwa.
Arnold09 / 22 / 2018 na 3: 38 am
Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị na-ekwu na nke a dị irè, echere m na m nwere ike ịzụta nke a maka nwunye m. Ọ chọrọ ịkwụsị ibu arọ, enweekwa nchekasị banyere ya, mana enweghi oge iji rụọ ọrụ ebe anyị abụọ na-arụ ọrụ n'ọfịs.
Katrina09 / 22 / 2018 na 3: 36 am
ọgwụ ọjọọ na-egbu mgbu na-ewu ewu na ụwa m ma enwere m olileanya mgbe niile na m ga-eri nri ma ahụ m ka na-adị mma.
Victor palmer09 / 21 / 2018 na 10: 23 pm
Enwere m otutu ngwọta ọnwụ na n'oge gara aga. Nke a bụ ọgwụ na-arụ ọrụ ebube nye m, m na-achọ ịnwa mgbatị dị arọ iji mee ka m dịkwuo mma.
Mog Arten09 / 21 / 2018 na 4: 36 pm
Achọpụtara m na ọ na-adọrọ mmasị na Sibutramine nwere njikọ dị ala maka 5-HT2Creceptor megidere ọgwụ ndị ọzọ na-efu ọnwụ. M ga-achọsi ike ịhụ mgbanwe niile nke kemịkal na-agbanwe kwa ụbọchị.
Miles Dubager09 / 21 / 2018 na 4: 32 pm
Ọ na-adọrọ mmasị na ọnwụnwa niile na nsogbu Sibutramine gafere. Echere m na pasent 80 nke ndị ọrụ nwere ike ịnọgide na-adị mma bụ ihe dị egwu. Daalụ maka ịkekọrịta! Mmepụta Sibutramine ga-eweta ọtụtụ uru maka oke ibu.
Lisa Nataliany09 / 21 / 2018 na 9: 22 am
O yiri ka m ga-anwale "Sibutramine ntụ ntụ (Meridia)", onye ọ bụla chọrọ ka ahụ nwee ahụ zuru okè ma dị mma. Na site na ozi zuru oke m nwetara ebe a, m ga-anwale ya ... Enweghị ihe nhụjuanya site na -eme nri ndị na-adịghị mma. Daalụ nke ukwuu!
Tracy Miles09 / 21 / 2018 na 8: 49 am
Sibutramine bụ FDA kwadoro, nke mere m ji ewere sibutramine na mbụ. Ọ dị irè dị irè ọ bụ ezie na ọ na-ewe oge na mgbalị.
Lance James09 / 21 / 2018 na 8: 05 am
Sibutramine dị mma n'ihi ọnwụm dị arọ m, enwere m otutu ihe site na ndị na-ere ahịa sibutramine.
admin, admin09 / 21 / 2018 na 3: 04 am
Daalụ maka ajụjụ gị, Sibutramine na ntụ ntụ ụbụrụ ga-abụ ezi echiche maka ịka nwa gị nwanyị dị ka ahụmahụ anyị si dị. Ịnwere ike iziga arịrịọ gị na email anyị: [Email na-echebe] ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ụfọdụ ka ọ ghara ịdị arọ.
mara mma12309 / 21 / 2018 na 1: 47 am
Okpokoro ihe ndina nile kwesịrị iji ọgwụ ọjọọ a kpọrọ ihe ma hụ otú ha nwere ike isi kwụsị ibu arọ n'enweghị nsogbu dị ukwuu maka ndị ahụ na-emega ahụ.
beta09 / 21 / 2018 na 1: 38 am
Akwa ịmatakwu ihe ọmụma banyere sulu na-eme ka ọ bụrụ uzuzu ma ana m ewere ụfụ sibu ugbu a.
Ryan09 / 20 / 2018 na 11: 46 pm
Echeghị m na ọ ga-enwe ihe ọ bụla na-emerụ ahụ banyere iwepụ ihe ọ bụla nke ihe mgbapụta ọnwụ ndị a ebe ọ bụ na FDA na Japan akwadola ya. A ghaghị iji ihe ndị a na-etinye ọnụ maka ọnwụ, n'ihi na ha na-efu ngwa ngwa ngwa ngwa. Nchịkọta ihe oriri na-ezighi ezi, ị nwere ike na-ere ọkụ ọkụ gị.
onyeisi09 / 20 / 2018 na 11: 42 pm
Nke a bụ ezigbo ọgwụ maka ibu m na-atụle ya na onye ọkachamara nwụrụ anwụ na-atụ egwu, a na-atụ aro ya nke ukwuu ma ana m eche na ọ ga-abụ nke onye dọkịta na-achịkwa ntakịrị.
Reuben Weru09 / 20 / 2018 na 11: 25 pm
Nke ahụ bụ isiokwu na-adọrọ mmasị maka sibutramine. N'ụzọ dị mwute, mmekọrịta ọgwụ ọjọọ na ọgwụ ndị ọzọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Amaghị m ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m jikọta ihe mgbakwunye ọnwụ.
Captain U09 / 20 / 2018 na 10: 34 pm
N'ikwu eziokwu, enwere m ihe oriri kachasị mma maka ụkọ ọnwụ kama ọ na-eme ka m nwee ọghọm mgbe niile. N'ihi na enwere m oke ntụ ntụ dị arọ, otú ahụ ka m na-echegbu onwe m gbasara ahụ m.
Mach09 / 20 / 2018 na 9: 40 pm
Nwa m nwanyị dị ntakịrị n'akụkụ akụkụ ahụ. Ikekwe, enwere m ike ịkwado ya ọgwụ ụfọdụ na-agba ya ma hapụ ya ka ọ nọrọ na ọdịdị dị mma. Ebee na mgbe ka nke a ga-adị?
Bradley Lavender09 / 20 / 2018 na 4: 10 pm
Ntọala Sibutramine maka 5-HT2Creceptor dị ka akụkụ ya kachasị mma. Enwere m ike ịhụ na ọ dị irè yana nri na-edozi ahụ na usoro mgbatị oge niile. Daalụ maka ịkekọrịta!
Ihe ntanetị09 / 20 / 2018 na 4: 05 pm
Ọ na-adọrọ mmasị na a na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe n'oge gara aga iji na-emeso ịda mbà n'obi na ọ bụ ihe mberede ka a chọpụtara. Ọ dị oke mkpa iji Sibutramine kwa ụbọchị ma na-agbaso usoro onunu ogwu.
David Tjoe09 / 20 / 2018 na 9: 27 am
Sibutramine dị mma na ọ na-arụ ọrụ nke ọma dị ka enyi m si kwuo. Achọrọ m ịnwale ụfọdụ ma ọ bụrụ na o kwere mee. N'ihi na abụ m nwa agbọghọ mara mma ma chọọ ime mgbanwe.
Ashley Blake09 / 20 / 2018 na 5: 46 am
Anụla m ihe banyere sibutramine ruo oge ugbu a. Ma ụjọ na-atụ m ịnwa ya. Mgbe m gụsịrị isiokwu a, echere m na ọ bara uru na-enyefe égbè.
Gavin Taylor09 / 20 / 2018 na 5: 43 am
Sibutramine nyeere m aka ịkwụsị ibu dị arọ kama ọ bụ na enweghị m ọrụ. Anọ m na-arụ ọrụ mgbatị ahụ ma na-eguzogide ụdị nri dị iche iche.
Bose09 / 20 / 2018 na 4: 37 am
Enwere m olileanya na m ga-echeta ozi a nke na-ewere ya oge niile n'otu oge ahụ kwa ụbọchị. Echere m na usoro ahụ dị mma, ọ gaghị eme ka mmadụ chefuo nhịahụ.
Jones09 / 20 / 2018 na 4: 31 am
Nwanne m na nwa obere nwanne m nọ n'ogo buru ibu na m na-achọ igosi mama nke a na mpempe akwụkwọ a tupu m gụọ ihe ndị dị n'okpuru16 afọ a nwere ike ime nke a. Gaara enyere ya aka n'ezie.
Erza Scarlet09 / 19 / 2018 na 9: 52 pm
Achọrọ m ịma otú m ga-esi were sibutramine dị ka ahụ m si dị ma ọ ka mma ibu ọnwụ?
Jiffy Rando09 / 19 / 2018 na 9: 48 pm
M na-agụ otu isiokwu na isiokwu a ugbu a, ekele maka ozi ndị ọzọ. Amaghị m ihe m ga-ahọrọ ime ihe n'eziokwu ma, ọ dịkarịa ala, ndị mmadụ na-eme ihe ugbu a nwere nhọrọ.
otuto09 / 19 / 2018 na 6: 45 pm
Ekwenyere m na ojiji Sibutramine kwesịkwara ịchịkwa karịsịa na ọ bụghị ihe amamihe dị na ya iweghara ihe karịrị afọ 2 na onye kwesịrị ijide n'aka na ọkachamara ga-edozi usoro ọgwụgwọ sibutram dị ukwuu. I nyere m ozi kachasị mma. Ana m eche ma ị ga-azụta ntụ ntụ iji nyere m aka ịkwụsị ịba afọ ugbu a.
kasị mma09 / 19 / 2018 na 6: 36 pm
Echere m na agụrụla m banyere sibutramine n'oge gara aga, ma enwere m mmasị n'eziokwu na ọ na-egbochi agụụ ka ọ ghara igbochi ịnweta calorie buru ibu n'ime usoro ahụ na nke mbụ ka m ka na-enwe ọdịdị dị mma ọ bụ ezie na enweela m ezigbo nri.
Moz Chesk09 / 19 / 2018 na 5: 07 pm
Ọ dị mma ịkụda ihe ngwongwo nke ngwongwo na ngwongwo ndị ahụ. Ihe niile dị m mkpa na onye ọ bụla chọrọ ịme ọdịdị ya. Daalụ maka ịkekọrịta!
Maury Cheskes09 / 19 / 2018 na 4: 28 pm
Ụda dị ka ọgwụ bara uru. Achọtara m otú o si ewetu serotonin na dopamine etoju na-adọrọ mmasị. Daalụ maka ịkekọrịta!
Moch Sugih09 / 19 / 2018 na 12: 44 pm
ezi isiokwu, Echere m na ụmụ nwanyị niile aghaghị ịgụ isiokwu a. n'ihi na ọ bụ naanị ụmụ nwanyị na-elebara ọdịdị ahụ ha anya mgbe niile na ha chọrọ ịma otú ha ga-esi malite ịdalata, karịsịa maka ụzọ isi na-efu ọnwụ na ụlọ na ọnwụ.
Dana Orwell09 / 19 / 2018 na 7: 47 am
Enwere m ike ịgba akaebe maka mmetụta nha ụbụrụ nke sibutramine. Na mbụ, amaghị m banyere ya mana n'ikpeazụ, m nyere ma gbalịa mpempe ihe ndị dị na ya. Mmetụta dị mma na ọdịdị m dị mma n'ọdịnihu nso, m juputara na ozi.
Aaron James09 / 19 / 2018 na 7: 45 am
Agbalịrị m ụdị ihe mgbu niile dị na mbụ. Nke a bụ naanị ọgwụ na-arụ ọrụ maka m.
Larry09 / 19 / 2018 na 2: 49 am
Nke a na uzuzu kwesiri iburu ibu ndi ozo. M ga-akwado Sibutramine nye onye obula nke na acho onu uzo ebe obu na FDA kwadoro ya, ana m ejide n'aka na o kacha mma maka ubu ibu.
Perry09 / 19 / 2018 na 2: 41 am
Ibu oke ga-adighi mma, na ogwu mgbochi ndi ozo m na-aguta ya bu ihe di irè maka oke ohia.
Hapụ A Comment
Biko tinye aha. Biko tinye adreesị ozi-e dị irè. Biko tinye ozi.
7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke -Phenylpiracet Ajụjụ 8 jụọ onwe gị tupu iwere Ceilistat ntụ ntụ
Jürgen Weber on (MK-677 Powder) Ntuziaka Ntuziaka Ntube
Mirco on Ihe Nlekọta 5 kacha elu n'iji ostine MK-2866 mee ihe
Dr. Patrick Young on Kasị irè arọ ọnwụ ntụ ntụ: Sibutramine ntụ ntụ (Meridia)
Lui on Kasị irè arọ ọnwụ ntụ ntụ: Sibutramine ntụ ntụ (Meridia)
Dr. Patrick Young on Zụrụ elu dị ọcha Tadalafil ntụ ntụ online: Ihe niile ị kwesịrị ịma !!!
Ngwaahịa kachasị mma
7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Sunifiram
7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Bromantane
Nyocha kachasị ọhụrụ
Clenbuterol (CLEN) HCL ntụ ntụ
Sibutramine hydrochloride ntụ ntụ
site na Sofie
Copyright © 2018 aasraw Ikike niile echekwara. Ezubere ya aasraw.com
Anabolic steroids ntụ ntụ emeputa